Fiarovana App App. Nahoana no zava-dehibe ho an'ny orinasanao izany? & Ndash; Semalt Mahalala Ny Valiny
Fiarovana App App. Nahoana no zava-dehibe ho an'ny orinasanao izany? - Semalt Mahalala Ny Valiny
Alexander Peresunko, Mpanomana Success Success Manager Semalt , dia hampiseho anao amin'ny fomba tsotra amin'ny fiainana ny antony maha-zava-dehibe ny fiarovana ireo fampiharana findainao amin'ny fanesorana ny botsa sy ny mpanodina.
Ny orinasa isan-karazany dia manolotra ny tetik'asa ara-barotra Mobile Aterineto mba hanamafisana ny traikefa ananany maneran-tany sy ireo mpanjifany eo an-toerana. Myntra no tsara indrindra amin'i India ary iray amin'ireo trano fivarotana lamaody amin'ny aterineto lehibe indrindra. Io no voalohany nampiasa ny fampiharana App App mobile, izay milaza fa ny tsara indrindra amin'ny fivarotana sy ny serivisy. Mazava ho azy, azonao atao ihany koa ny manaiky an'io tetik'asa ara-barotra io, saingy misy foana ireo loza mety hitranga amin'ny fiarovana.
Misy tsy fahazoan-kevitra sasany azo antoka fa azo antoka kokoa ny fampiharana finday noho ny tranonkala momba ny fisorohana ny bots, ny fanodinana tranonkala, ary ny fiarovana ny votoaty - android app kosten. Saingy rehefa mandinika ny antsipiriany isika, dia ho tonga saina fa maro ny olana dia miaraka amin'ny tranokala sy ny fampiharana finday. Noho izany, ilaina ny fiarovana amin'ny mpangotraka sy ny bots. Isan'andro, maro ireo olana atrehin'ny tranokala sy ny fampiharana finday izay mila ny sainao sy ny asa mafy. Raha tianao ny hanome laka ny orinasanao, dia ny safidinao tsara indrindra dia ny mamela ny tenanao vetivety ary manaisotra bots and scrubes faran'izay haingana.
Ny fampiharana finday dia mamela ny mpampiasa handany ny vaovao sy ny angon-drakitra atolotra amin'ny alalan'ny tranonkala samihafa..Ireo tolotra tranonkala sy ny angon-drakitrao ireo dia mora voadona. Ny votoatin'ny tranonkala dia azo angidina ho an'ny tanjona samihafa amin'ny programa maoderina antsoina hoe bots. Raha te-hanaisotra azy ireo ianao dia tsy maintsy manakana ny adiresy IP satria izy io no fomba tsotra sy tsara indrindra hisorohana ny fahatongavan'ny bots.
Tsy mety ny milaza fa ny olana amin'ny bots dia iray amin'ireo olana lehibe indrindra amin'ny finday sy tranonkala. Ireo orinasa dia mamoy ny angon-drakitra sy ny vaovao mafonja amin'ny aterineto noho ireo bots ireo. Mivezivezy amin'ny fampiharana marobe izy ireo mba hangalatra na hametaka ny angon-drakitrao, ka hitarika amin'ny fampiasana ireo apps izay mikarakara mpampiasa marina sy mpanjifa samihafa.
Ny fiantraikan'ny fiantraikany eo amin'ny raharaham-barotra
Ny fampiharana malaza toa an'i Tinder sy Snapchat dia niady basy ratsy nandritra ny volana maromaro. Voalaza fa nanakana ny fahitana sy ny fitantanana ny orinasam-pandraharahana izy ireo, ka nahatonga ny mpanjifa sy ny mpampiasa ho tsy dia nisy dikany. Vao haingana, nisy ny fifandirana teo amin'i Myntra sy ny orinasa iray tsy fantatra anarana. Ity farany dia afaka nametraka ny apps sy ny votoatin'ny Myntra amin'ny vohikala sy ny sehatra samihafa. Nitarika ny orinasa hanakatona ny tolotra maro izany satria tsy nino ny mpanjifa Myntra sy ny vokatra nananany. Noheverin'izy ireo fa dikan-teny desktop tsy ara-dalàna izy io ary nanomboka nanala azy tamin'ny rafitra. Ny tena zava-tsarotra dia tena zava-dehibe tamin'io lafiny io, ary nisy fanontaniana maro tonga tao an-tsainay. Ny iray amin'ireo fanontaniana ireo dia ny fampiharana na ny orinasa rehetra mila fiarovana amin'ny robots sa tsia?
Fiarovana API API
Tena zava-dehibe ho an'ireo orinasa mpikirakira hividianana ireo fampiharana finday sy ny endrik'izy ireo amin'ny bots. Tsy maintsy mampiasa ny vahaolana azo antoka momba ny fiarovana izay afaka miaro ny angon-drakitra sy ny tolotra web amin'ny malware sy bots. Tsy asa mora izany ary mety mitaky fotoana sy ezaka be ataonao. Na dia ny rindrambaiko Antivirus sy ny fitaovana malware aza dia tsy misy dikany satria tsy manome antoka ny vokatra iriana izy ireo.